Gareth Bale oo go’aansaday inuu guri ka iibsado Magaalada Manchester… (Kooxdee doonayaa inuu ku biiro?) – Gool FM
Gareth Bale oo go’aansaday inuu guri ka iibsado Magaalada Manchester… (Kooxdee doonayaa inuu ku biiro?)
Haaruun March 9, 2019
(Manchester) 9 March 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Gareth Bale ayaa la soo warinayaa inuu go’aansaday inuu Albaabada u furo inuu u dhaqaaqo naadiga Manchester United.
Bale ayaa haatan ku jira xilli ciyaareedkiisii lixaad ee garoonka Bernabeu, laakiin xiddiga heerka caalami ee xulka qaranka Wales ayay dhowaan ku orriyeen taageerayaasha kooxda Los Blancos, isla markaana waxa uu dhaleecayn kala kulmay saaxiibadiisa ay isku kooxda yihiin.
Warbixinno hore ayaa soo jeediyey in Bale uu ku faraxsan yahay nolosha dalka Spain, laakiin sida uu warinayo haatan warsidaha Don Balon 29-sano jirkaan ayaa isku diyaarinaya inuu dib ugu soo laabto horyaalka Premier League.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Bale uu go’aansaday inuu guri ka iibsado Magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska, isagoo sidoo kalena ku faraxsan inuu heshiis shakhsiyadeed la galo kooxda ka dhisan Waqooyi-Galbeed Ingiriiska.
Si kastaba ha ahaatee, labada kooxood ayaa laga yaabaa inay ku adkaato inay ku heshiiyaan qiimaha ciyaaryahankan, iyadoo Man United ay doonayso kaliya inay laacibkan ku hesho adduun dhan 68 milyan oo gini.
Bale ayaa horay uga soo ciyaaray horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaana uu ka tirsanaa kooxda Tottenham ka hor inta uusan u dhaqaaqin caasimadda Spain oo uusan ku biirin Real Madrid.
Jesse Lingard oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Manchester United - Miyuu ciyaarayaa kulanka Arsenal?
Xiddig ka tirsan kooxda Chelsea oo bishii Janaayo qarka u fuulay inuu ku biiro Juventus